UTom Sturridge Movie & TV - Kufanele Ubuke - Ezokuzijabulisa
UTom Sturridge wabizwa ngokuthi nguThomas Sidney Jerome Sturridge ngesikhathi sokuzalwa kwakhe. Ungumlingisi odume kakhulu waseBrithani odume ngokuvela kwamanye amafilimu afana neFairyTale: A True Story, Like Minds, Being Julia, Brothers of the Head, On the Road namanye ama-movie amaningi.
Sizoklelisa amanye ama-movie akhe amahle kakhulu nemibukiso ye-TV ongayibuka. Dlula kuhlu olungezansi bese uphawula oyithandayo kusigaba samazwana ngezansi. Futhi btw sisohlwini lwe-Must watch Jake Gyllenhaal Ama-movie nemibukiso ye-Tv esihlokweni sethu esedlule, ungakubheka lokho esigabeni sethu sebhulogi.
UJake Gyllenhaal& UTom Sturridge ufake inkanyezi ku “ ULWANDLE LOLWANDLE / UKUPHILA . '
UTom Sturridge Ama-Movie nemibukiso ye-TV:
1. UMary Shelley
Lapho uMary Wollstonecraft nomlingani wakhe uPercy Shelley oyimbongi, bememezela ubudlelwano babo nomndeni wabo, umndeni kaMary awuhambisani nalokhu.Umndeni ushaqeka maduzane lapho uthola ukuthi uMary nothando lwakhe baye baphunyuka ngenkathi udadewabo kaMary ngamzali munye, uClaire, ehambisana nabo.
Ngenkathi behlala ekhaya likaLord Byron eduze neLake Geneva, baphonselwe inselelo yokubhala indaba yesipoki, ngalokhu kuholela ekutheni uMary abhale inoveli yakhe eyaziwa ngeFrankenstein.
Le movie ikutshela indaba kaSal Paradise ongumbhali osemusha impilo yakhe esethusile yaphinde yachazwa ngemuva kokufika kukaDean Moriarty ongumuntu waseNtshonalanga onomoya okhululekile. Kususelwa kunoveli ethi On The Road eyabhalwa nguJack Kerouac.
USal noDean bobabili baqhubeka nesifiso sabo sokufuna inkululeko kwi-conservatism kanye nokuvumelana. Bahamba ezweni lonke befuna okuthile okungaziwa.
Ingabe iNetflix Inikeza Isaphulelo Somfundi?
3. Kude Nezixuku Zasemadding
Kude neMadding Crowd yi-movie yothando yaseBrithani eqondiswe nguThomas Vinterberg. Ikhishwe cishe ngo-2015.Kwakuyinto eyenziwe nguDavid Nicholls wasuka kwinoveli ka-1874 eyayiyiFar From The Madding Crowd ebhalwe nguThomas Hardy. Yebo, kuyaziwa ukuthi kuseduze nokulungiswa kwefilimu yesine kule noveli.
Lezi zihlabani ze-movie uTom Sturridge, Michael Sheen, Carey Mulligan, noMatthias Schoenaerts.Intombazane ehamba phambili ehamba phambili kufanele ibhekane nezilingo eziningi nezinsizi eza empilweni yakhe ngenkathi kufanele abhekane nokunaka kwabesilisa abathathu abahlukene. Omunye ngumfuyi wezimvu, omunye usayitsheni ongenandaba bese kuthi owokugcina abe ngumthombo wokwenza ibhakha elivuthiwe.
4. Ukuphela Kohambo
IJourney’s End yifilimu yempi yaseBrithani esekwe emdlalweni weshashalazi wango-1928 iJourney’s End kaR. USherifu. Le movie ikhishwe cishe ngo-2017.Kubhalwe nguSimon Reade futhi i-movie iqondiswe nguSaul Dibb. Ungasho ukuthi kusondele ukuguqulwa kwefilimu yesihlanu komdlalo weJourney’s End. I-movie ihlolwe esigabeni se-Special Presentations ku-Toronto International Film Festival 2017.
Ikukhombisa indaba yeqembu lezikhulu zaseBrithani. Leli qembu liholwa yisikhulu esencane kakhulu esaziwa ngokuthi iStanhope impilo yaso yengqondo iye yaphela ngokushesha. Iqembu lamaphoyisa lilindele isiphetho salo emgodini owawuse-Aisne ngo-1918 ngesikhathi seMpi Yezwe I.
Lo mdlalo ukhuluma ngezikhulu zaseBrithani ekupheleni kweMpi Yezwe I. IJourney’s End ingumdlalo wesinema womdlalo kaR. USherifu ongumakadebona empini. Lo mdlalo wawukhonjiswe ngesiNgisi cishe ngonyaka we-1928 kanti uLaurence Olivier ubedlala indima ephambili.
Umdlalo iJourney’s End wawushisa kakhulu futhi kwafakazela abantu ukuthi ungakhula ngemuva kweminyaka eminingana nawo. Yingakho abanye abenzi bamafilimu beze ne-movie yesihloko esifanayo.
Yenza kusebenze isilingo samahhala sezinsuku ezingama-30 samahhala
Ngemuva kokuhola phambili (uTom) eshaywe ekhanda ngento ethile ewayo, uTom uyalulama ngaphandle kwenkumbulo bese ekhokhelwa izigidi zokuthula.
Njengoba uTom engenabunikazi, uTom uzama ukuphinda enze okwedlule ngokudweba ngokucophelela izingcezu zememori.
Lo mbukiso ukukhombisa impilo yentombazane eneminyaka engu-22 egama linguTess, esanda kufika eNew York City futhi ayinazo izifiso ezithile ngaphandle kokuthola umsebenzi.
Ubuhle bakhe kanye nemvelo yakhe kumnika isimemo sokuziqeqesha kwenye yezindawo zokudlela ezaziwa kakhulu nezihamba phambili edolobheni. Uzizwa ukuthi yindawo yesikhashana yokusebenza ukuze athole ikhefu elikhulu lempilo yakhe. Ngokushesha uTess udakwe abantu ahlangane nabo futhi nezwe elihlukile, ubelokhu ehlangabezana nakho njengokuzama iwayini elibizayo, ukufunda ukuthi ngubani ongamethemba, ukuthola imigoqo yokutshuza.
Ngokushesha, ozakwabo abasebenza noTess baba njengomndeni wakhe, futhi ngenxa yabo, uzizwa sengathi usezweni elihlukile njengomqondo wokuba ngowakhe angakaze ahlangane naye phambilini.UTom Sturridge udlala indawo kaJake, osebenza njenge-bartender endaweni yokudlela efanayo lapho kuqashwa khona uTess.
Isosha langaphambili elihlukumezekile lizama ukusiza osemusha ongenakhaya. Kepha, lapho engena nomfana ofanayo, isoka lakhe elinodlame kakhulu lithola ithuba lokulawula isimo.
8. Ukulinda Phakade
Ukulinda Phakade i-movie yaseMelika mayelana nezothando eyakhishwa cishe ngo-2010. Iqondiswe nguJames Keach. Izinkanyezi uTom Sturridge noRachel Bilson.Le movie idutshulwe eSalt Lake City nase-Ogden, e-Utah. I-movie yayinomdlalo omncane kakhulu weshashalazi owaqala ngoFebhuwari 4, 2011.
Nokho, ngokuthembeka, amanye ama-movie ayinto nje esizibukelayo, kuyilapho kunamanye ama-movie adabukisa kakhulu. Kukuthatha ku-roller coaster yothando. Uma ubuka le movie ethile, siqinisekile ukuthi ngeke ukwazi ukuyeka ukukhala ngokubona bonke abalingiswa. Kufana nokuthi inothando oluningi njengohlobo lothando lwe-bro-bro, uthando lukamama nobaba, nokunye okuningi nje. Le filimu izohlala nawe kuze kube phakade!
UTom Sturridge ungumenzi wasemgwaqweni ongenaso isifiso ngaphandle kokuphinde axhumane nomngane wakhe omkhulu wezingane (uRachel Bilson) futhi azame ukuqala okunye ukuxhumana naye.Ukulinda i-movie engunaphakade kususelwa endabeni yothando lwempilo yangempela.I-movie izokugcina ulenga emsileni wazo zonke izigcawu, ulinde ukubona futhi uzama ukuqagela ukuthi kuzokwenzekani esigcawini esilandelayo.
Nakanjani uzomomotheka ngenjabulo esuka enhliziyweni noma ugcwale intukuthelo futhi ungaze ukhale ngokungalawuleki ngomuzwa wosizi olujulile.Umqondisi ubemele i-movie kuyo yonke indawo, ethatha yonke into kahle hhayi ukunakwa kwakho kuphela. Kepha, ukugxila kuyo yonke imininingwane kwenza le movie yamnandi. Ungathanda ukubuka le movie kaninginingi.
Le movie iyisasasa laseBrithani elisethwe esikoleni okuhlalwa kuso e-UK. Umfana wesikole owaziwa njengo-Alex - umfana oneminyaka engu-17 okhaliphile futhi onenhlanhla usolwa ngokubulala umuntu ahlala naye egumbini lakhe owaziwa ngoNigel.Amaphoyisa athola uSally ongudokotela wezengqondo ocwaningweni ukuthi ambuze mayelana nokubulala kanti uma eqala ukumbuza, ufunda izwe eliyinqaba lezimfihlo nokuzibandakanya kwakhe neTemplar Knights.
Umlingiswa kaSally Rowe udlalwa nguToni Collette oyisazi sokusebenza kwengqondo yamaphoyisa. Uchitha uhhafu wefilimu exoxa nawo wonke umuntu omzungezile njengoPosh, Alex, Sulky.UTom Sturridge udlala indawo kaNigel obulewe. U-Alex uyakuphika ukudubula uNigel (Tom Sturridge).Ngakho-ke, uSally Rowe kufanele athole ukuthi liyini iqiniso ezingqondweni zentsha ekhanyayo.
Umbhali nomqondisi uGregory J Read bakwenze kwaba nzima kanzima ukuqagela ngabalingiswa abangaqondile.Kukhona ezinye iziza ezithakazelisa kakhulu njengokuchoboza kuka-Alex enganeni yesikole konke kuhlangene nokubulala kanye nemfihlakalo.Uma uthanda ukubuka izimfihlakalo, ngokuqinisekile uzothanda le movie.
10. UHenry V: Umqhele Ongenalutho
Indaba iqala ngomngcwabo kaHenry V, ngemuva kwalokho le ndaba ikhombisa impilo kaHenry V. Yifilimu yethelevishini yaseBrithani esuselwa emdlalweni wegama elifanayo likaWilliam Shakespeare. Iqale ukusakazwa ngo-2012.UHenry V yifilimu yesine kanye neyesine emdlalweni we-tetralogy wamafilimu wethelevishini obizwa ngeThe Hollow Crown kanye nomdlalo weShakespeare tetralogy.
IHollow Crown ikhiqizwa nguSam Mendes weBBC Two ehlanganisa yonke iShakespeare's Henriad. Iqondiswe kahle nguThera Sharrock.Kukhombisa ukuthi amaFulentshi aliphonsela kanjani inselelo impi yamaNgisi ukuthi ilwe impi eyayise-Agincourt.
UTom Sturridge wenze ama-movie amaningi amenzele igama nodumo kwabezindaba.Uma ukhuluma ngokwaziwa uTom Sturridge akutholile ngomsebenzi wakhe wobulingisi, ubuye waqokelwa umklomelo we-Tony Award womkhakha we-Best Performance ngu-Actor ku Ukuhola Indima kumklomelo we-Google Play . Ubuye waqokwa kuma-Olivier Awards ngokusebenza kwakhe okumangalisayo njengomlingisi osekelayo.
Yiba yinoma iyiphi indima nomlingiswa, uhlala enikela ngokusemandleni akhe. Uzama ukungena ngaphakathi komlingiswa we-movie futhi anikeze ukusebenza okuhle kakhulu njalo. Yingakho esedume kangaka.Sibhale ngenhla amanye ama- Ama-Movie nemibukiso ye-TV ongabuka ukuze ubheke ukuthi ungumlingisi okhaliphile kangakanani.Ungabuka noma yimaphi kulawa ma-movie noma imibukiso ye-tv bese uzibonela ukuthi uTom Sturridge uzolubamba kanjani lolu hlelo.
Lesi Sikhathi Esibalulekile Se-'Yellowstone' Isizini 5 Izindaba Ikhombisa Ukubuya KukaJimmy
Yazi Nge-Die in a Gunfight Cast And Plot